တရုတ်နှစ်ကူးမှာ မိသားစုနဲ့နေဖို့ အကျဉ်းသားတွေကို ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာ တပ်ပြီး ခေတ္တပြန်လွှတ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး တရုတ်နှစ်ကူးမှာ မိသားစုနဲ့နေဖို့ အကျဉ်းသားတွေကို ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာ တပ်ပြီး ခေတ္တပြန်လွှတ်
More thanahundred Chinese prisoners listen to the verdict...epa00147526 More thanahundred Chinese prisoners listen to the verdict made by the judges during the first public remission hearing in Yunnan Province of China, 04 March 2004. During the hearing the petition of remission of 13 prisoners, who were sentenced to life imprisonment in former trials, were examined by the judge and their requests were accepted with the lessening of prison sentence to about 18 - 20 years of imprisonment. EPA/Wang Bingyu
တရုတ်နှစ်ကူးမှာ မိသားစုနဲ့နေဖို့ အကျဉ်းသားတွေကို ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာ တပ်ပြီး ခေတ္တပြန်လွှတ်
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ မိသားစုနဲ့နေနိုင်ဖို့ တရုတ်အစိုးရက အကျဉ်းသား ၁၃၀၀ ကို ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာတွေ တပ်ဆင်ပြီး အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်နှစ်ကူးကာလအတွင်း မိသားစုနဲ့ တွေဆုံနိုင်စေဖို့ အကျဉ်းသားတွေကို ၅ ရက်ကြာ အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေမှာ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရှိတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို နှစ်တိုင်း မိသားစုဆီ ခေတ္တပြန်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။ အဲဒီလို လွှတ်ပေးဖို့ ဥပဒေ ပြဌာန်းထားပေမယ့် အကျဉ်းသားတွေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မှာ စိုးရိမ်တာကြောင့် အနည်းငယ်သာ အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရှန်ဟိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ထွက်ပြေးမှုကို တားဆီးနိုင်အောင် အကျဉ်းသားတွေကို ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာတပ်ဆင်ပြီး မိသားစုဆီ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာက အကျဉ်းသားတွေ ရှိမယ့်နေရာကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာကို ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင် အဲဒီပစ္စည်းက ချက်ခြင်း အချက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
တရုတျနှဈကူးမှာ မိသားစုနဲ့နဖေို့ အကဉျြးသားတှကေို ထောကျလှမျးရေး ကိရိယာ တပျပွီး ခတ်ေတပွနျလှတျ
တရုတျနှဈသဈကူးမှာ မိသားစုနဲ့နနေိုငျဖို့ တရုတျအစိုးရက အကဉျြးသား ၁၃၀ဝ ကို ထောကျလှမျးရေး ကိရိယာတှေ တပျဆငျပွီး အာမခံနဲ့ ပွနျလှတျပေးလိုကျပါတယျ။
တရုတျနှဈကူးကာလအတှငျး မိသားစုနဲ့ တှဆေုံနိုငျစဖေို့ အကဉျြးသားတှကေို ၅ ရကျကွာ အာမခံနဲ့ ပွနျလှတျပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံရဲ့ ဥပဒမှော စညျးကမျးလိုကျနာမှုရှိတဲ့ အကဉျြးသားတှကေို နှဈတိုငျး မိသားစုဆီ ခတ်ေတပွနျဖို့ ခှငျ့ပွုပေးထားပါတယျ။ အဲဒီလို လှတျပေးဖို့ ဥပဒေ ပွဌာနျးထားပမေယျ့ အကဉျြးသားတှေ ထှကျပွေးလှတျမွောကျမှာ စိုးရိမျတာကွောငျ့ အနညျးငယျသာ အာမခံနဲ့ ပွနျလှတျပေးခဲ့ပါတယျ။
ရှနျဟိုငျးအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့က ထှကျပွေးမှုကို တားဆီးနိုငျအောငျ အကဉျြးသားတှကေို ထောကျလှမျးရေး ကိရိယာတပျဆငျပွီး မိသားစုဆီ ပွနျလှတျပေးခဲ့တာ ဖွဈပွီး အဲဒီ ထောကျလှမျးရေး ကိရိယာက အကဉျြးသားတှေ ရှိမယျ့နရောကို ဖျောပွနိုငျပါတယျ။ ထောကျလှမျးရေး ကိရိယာကို ဖကျြဆီးမယျဆိုရငျ အဲဒီပစ်စညျးက ခကျြခွငျး အခကျြပေးလိမျ့မယျလို့ အာဏာပိုငျတှကေ ပွောပါတယျ။
Previous articleMCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက် သောကြာနေ့
Next articleဖိလစ်ပိုင် ဓမ္မဆရာ ဟာဝိုင်အီမှာ ငွေ၊ သေနတ် အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အဖမ်းခံရ